भोज कटौती गरी सहयोग
४ कार्तिक २०७५ आइतबार/ ०८:२२
रेणुका काफ्ले -
काठमाडौं, २६ माघ । परम्परा ! पुण्य कि विसंगतिका लागि ? यस प्रश्नको सटिक जवाफ दिए पूर्व महान्याधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्त सुशीलकुमार पन्तले ।
नेपालमा गिनेचुनेका वकिलमा गनिने पन्तको छोराको बुधबार विवाह भयो । तर, सो विवाहमा उनले एकाधलाई छाडेर आफ्ना कुनै पनि व्यवसायिक तथा पारिवारिक मित्रलाई निमन्त्रणा गरेनन् । उनले हिसाब लगाए ति मित्रहरुलाई भोज खुवाउँदा झन्डै ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने रहेछ । उनले त्यही ४० लाख रुपैयाँ बिहीबार क्यान्सर केयर प्रतिष्ठान र पूण्यार्जन प्रतिष्ठानका नाममा सहयोग गरे, २०–२० लाखका दरमा । उनको निर्णय छोराका साथै पत्नी कुमुदा पन्तले पनि साथ दिइन् ।
समाजिक कार्यमा हुने फजुल खर्च न्युनिकरण गरि केही नयाँ कार्यमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्य गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले जानकारी दिए । साथै उनले भने, ‘समाजमा अरुलाई पनि फजुल खर्च नगरि सहयोग र दानको भावना बसाल्न सहयोग होस् उद्देश्यले यो समारोह गरिएको हो ।’ समारोहमा नेपाल क्यान्सर प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल र पून्यार्जन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा.शुसिल कोइरालालाई सो सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
विगत ७ वर्ष देखि सञ्चालमा आएको नेपाल क्यान्सर केयर प्रतिष्ठानले विशेष गरि महिला हुने क्यान्सर रोग पत्ता लगाउन कार्य गर्दै आएको डा. सरिता घिमिरेले जानकारी दिईन् ।
यसैगरी विगत दुई वर्षदेखि जन स्वास्थ्यका कार्य गर्दै आएको पुण्यार्जन प्रतिष्ठानले ३६ हजार एनजिओभन्दा फरक कार्य गरेको अध्यक्ष डा. कोइरालाले जानकारी दिए । साथै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिलाई मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा लगाउने उद्देश्य प्रतिष्ठानको रहेको बताए ।
बिवाह, ब्रतवन्ध, भोज–भतेर, जन्म उत्सव जस्ता कार्यमा देखावटी रुपमा मात्र समाजलाई देखाउन मात्र गरिने कार्यलाई रुपान्तरण गरेर सबैमा सहयोगी भावना जागोस् भन्ने हेतुले सुरु गरिएको यस्तो कार्य प्रसंसनीय रहेको पूर्व अर्थ, परराष्ट्र तथा सञ्चार मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीले वताए ।
सोही अवसरमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधिस दिपकराज जोशीले समाजलाई परिवर्तन गर्न सहयोगी भावनाको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबैीत्र सुशीलको बिहेको चर्चा छ । सबै जना मलाई बोलाएन भनेर बसिरहेका छन् । जब भोलि उनीहरुले आपूmलाई नबोलाएको कारण थाहा पाउँछन्, अन्त्यन्त खुशी हुन्छन्,’ न्यायाधिस जोशीको दावी थियो ।